Daawo:- Cirro oo si adag uga hadlay sawirkii ay wada galeen Biixi iyo Wasiirada katirsan DF Somalia. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Gudoomiyqha xisbiga Mucaaradka Somaliland ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro oo shir jaraaid kuqabtay magaalada Hargaysa ayaa kahadlay arimo ay kamid yihiin Dagaalkii Ceel Afwayn iyo Hadal haynta sawirkii ay wada galeen Madaxwayne Muuuse biixi iyo wasiiro katirsan Dowladda Somalia.
Previous articleDaawo:- Puntland oo kahadashay shan Alshabaab ah oo kayimid Somaliland oo lagu qabtay Sanaag.
Next articleAkhriso:- Magacyada iyo qabiilada xildhibaanada cusub ee Jubbaland.
Fowsi August 13, 2019 At 10:29 pm
Odaygii way ka dhamaatay, berigii hore wax nuxur leh buu ku hadli jirey maanta waxay noqotay yaa i caayi jiray.
Siyaasadu mararka qar way ku dhaandhaantaa ileyn wax badan baad ogtahay wax badana waad qarinaysaaye, balse karti xumadu waxay kuu keentaa inaadan talaabo qaadi karin adigoon daawanayn waxa nin kale uu sameeyo.
Muu Xamar berri ka dego yaa isaga xarig ku haysta.
Ahmed August 13, 2019 At 11:44 pm
Oo muxuu Xamir Beri uga degeyaa? Ma isagaaba raboba? Ciro mucaaradnimafu meeshey doonto hakala dhacdo. Dawladana waxey dhaleel leedahay ee uu farta ku fiiqi karona ha haku fiiqo. Doorka danbena ha u sii gogol fidsado. Taasi waa shuqulkiisa iyo shaqadiisa.
Se Xamar aanu Rabin ma waxa ka dejinaya Muuse neceyb iyo Doorashaa la’iga heley. Waar wuu liqay taas. Madaxweynihiisuna waa Muuse Biixi. Dalkiisuna waa Somaliland. Meel kale oo uu aadayaana ma jirto.
Warku ma kubgalay Fowsiyoow?